ပါလေရာ ငပိချက် ဒို့မြန်တြံ့စစ်တပ် Filthy | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ပါလေရာ ငပိချက် ဒို့မြန်တြံ့စစ်တပ် Filthy
ပါလေရာ ငပိချက် ဒို့မြန်တြံ့စစ်တပ် Filthy
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 10, 2016 in Opinions & Discussion | 11 comments
မင်ဂလာဈေး တနေ့ညက မီးလောင်တယ်ဂျာ… သန်းသုံးသောင်းခြောက်ထောင်ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံးဆိုလား။ ၂၀၁၁မှာလဲ တခါလောင်ပီးပြီ.. မီးဓါတ်ကျနေတဲ့ မြေနေရာ အကွက်အကွင်း ဖြစ်မယ်။ အလိုအလျောက် မီးသတ်စနစ် တပ်ထားပေမှဲ့ သုံးထားတာ ကော်ပိုက်၊ အပေါစားတွေမို့ မထိရောက်၊ အလုပ်လုပ်ပုံမြဘူးတဲ့။ ညလုံခြုံရေး အားနည်းချက်လည်း ပါစိုပဲ… လခ ဘယ်လောက်ပေး လူဘယ်နှစ်ယောက် ခန့်ထားတယ်တော့မသိ။ ထွက်လာတာ သဒင်းတွေ။ အသေးဆိတ် သုံးသပ်ချက်တွေ မကြာမှီ ပေါ်ထွက်လာအူးမှာပါ။ ကံဆိုးသူမောင်ရှင် ဘူများ ဖြစ်လေမလဲ…။
တခြားဟာတွေ ထားပါတော့၊ ကိုယ်လည်း ပညာရှင်မဟုတ်.. တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုလည်း မရှိ။ ထောက်ပြခြင်တာ စစ်တပ်ဝင်လာတာ.. အံမယ် ဖဘမှာ တက်လာတယ်.. တာဝန်ယူပေးတဲ့ စစ်သားတွေကို အစားအသောက်ပေးတာ မယူရဲကြလို့ (သူတို့ကို လူတွေအထင်လွဲမှာ ဆိုးလို့တဲ့… သန်းဂေါင်ထက် ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး ခေးတို့လျှာ… ဝါးမှာသာဝါး) လှူ သူအချို့ ငိုတောင်ငိုဆိုပဲ.. (ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ.. ဘယ်သူ့ကို ပိုသနားရမှန်း မသိတော့ဘူး.. ဆိုင်ပိုင်ရှင် တွေကိုလား၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မည့် ဝန်ထမ်းကိုလား.. အလှူ ရှင်ကိုလား အလှူ ခံကိုလား…)။
အများပြည်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုအခင်းဖြစ်လျင် အဓိကတာဝန် အရှိဆုံးသည် ပဋိပက်ခထိန်းချုပ်ရေးဌာနချုပ် သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီမှာ တာဝန်အရှိဆုံး။ မြန်တြံပြည်မှာတော့ ပြည်ထဲရေးဝံကျီးဌာန သို့ သူ့လာဘ်အောက်ခံဌာနတခုခု ဖြစ်ပါလိပ်မည်း။ အဲဒီနှာဌက ကွပ်ကဲအမိန့်ပေး… မြေပြင်မှာ ရပ်ကွက်လူထု၊ရဲ၊ မီးသတ်၊ ကြောင်ခြေနီတွေ လှုပ်ရှားကြပေါ့။ အစိုးရအဖွဲ့ တခုအတွက် နဂိုထဲက အစီအစဉ် ရှိပြီးသားဟာတွေပါ.. ဘာာမှ အထူးအဆန်းမှုတ်။ ခုဟာက ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် စစ်သားတွေ မြင်နေရသဗျ။
မီး မီး လောင်လျင် မတား
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းမှာ စစ်ဆိုတာ အင်မတန် ရိုင်းစိုင်းမှု၊ ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့အဆုံးမှ သုံးရတာ။ ဒါကြောင့်ပဲ လာဘ်နက်ကိုင်ခြင်းအတူတူ အရပ်သားတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ပေါ်လာရတယ်။ ပိုကြီးထွားလာတော့ အရပ်ဖက် ပြသနာ အရေးအခင်းတွေ ဖြေရှင်းဖို့ (အမှန်က ထိန်းချုပ်ဖို့ပါ၊ ဖြေရှင်းယုန်ဆို လုံထိန်းမလို) လုံခြုံရေးအဓိကရုဏ်းတပ်တွေ တိုးချဲ့လာရော။ အဲဒီ ဖွင့်ဆိုချက်ကြောင့်ပဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ အနိမ်ဆုံးလိုအပ်ချက် အရည်အချင်း စတာကို စစ်တပ်နဲ့ မတူတဲ့ အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ရတယ် မဟုတ်လား။ လက်နက်ကအစ စစ်တပ်လို့ လောင်ချာတွေ ဒုံးကျည်တွေ မပါရဘူး။ တလောက ယူအက်စ် မြို့တမြို့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် စစ်တပ်သုံး သံချပ်ကာယဉ် အသုံးပြုခွင့်ပြုတော့ အရပ်ဖက်လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မသင့်တော်ပါ ဝိုင်းအော်ကြလို့ ပြန်ရုပ်သိမ်းရတယ်။
စစ်တပ်ဝင်လာ၊ တိုက်ရိုက်ပါဝင် ပတ်သက်ဖို့ဆို အရေးပေါ်အခြေအနေ သတ်မှတ်ကြေငြာ ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒါတောင် အဆင့်ဆင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိမည်။ ထောက်ပံ့ရေးပစ်စည်းပဲ လိုခြင်သလား၊ သယ်ယူပုို့ဆောင်ရေးယဉ်များပါသလား၊ စစ်ဘက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် အသုံးပြုလိုသလား၊ နောက်ဆုံး မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိ တောင်းဆိုလိုသလား။ မင်ဂလာဈေး မီးလောင်တဲ့ ကိတ်စမှာ မြေပြင်လုံခြုံရေး တာဝန်ယူပေးရမည့် လုံထိန်းတပ်တွေ ဘယ်သွားတေနေသလဲ။ အင်အားထောင်သောင်းချီ နဲ့ လာဘ်နက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာ တပ်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဗျူ ဟာကျနေရာများမှာ တပ်စွဲတဲ့ လုံထိန်းတပ်ရင်းတွေ တေကုန်ပလား။ မရှိလို့ ဟုတ်ဟန်မတူ.. တမင် မသုံးဘဲ ထားတာဖြစ်မည်။
စစ်တပ်ကို နေရာပေးခြင်လို့.. ထစ်ကခနဲရှိ စစ်တပ်ကို လူတွေ တမ်းတအောင် လုပ်နေ လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ်သာခြင်တော့ သူများကို ချိုးထား နှိမ်ထားပေါ့။ အဲဒီ သောက်ကျင့် မပြောင်းသေး.. လုံလောက်တဲ့ ဖိအား မပေးသရွေ့ ဒီအတိုင်းဆက် ရူးခြင်ယောင် ဆောင်ကြပါအူးမည်။ နောင်လာမည့် ဒီချုပ် အစိုးမြ လာဘ်ထက်မှာ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းနဲ့ မိတ်ဖက်ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ညီလာဘ်ညီ ပြင်ရကောင်းမှန်း သိပါမှ အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေး တည်တံ့မည်။ နို့မို့ဆို မြင်ပါများတော့ရိုး.. ရိုးလာတော့ စိုးရိမ်စရာလို့မမြင်.. ဒါနဲ့ ရေတို တနပ်စားပဲ မြင်ကြ ကြံကြ.. အဆုံးတော့ စစ်ကျွန်ဘဝ ပြန်ရောက်ပါလေရော…။
မြန်ကြံ့ရေးလျှာ ပုရောဟိတ် ဆြာကြီးဦးကြောင်
နာဆို အဲဒါ ဖတ်ပြီးး မက်ရည် ဘူးသီးလုံးးလောက်ကျတာာာာ..
အမှတ်မရှိ ငိုတဲ့ ဟာတွေ ငိုကြတုန်းးးး
နိ လည်းး ရွာ့ပြင်မှာသာနေ သလားး ကြောင်..
အမဲတွေဆန္ဒပြတဲ့.. ဖာဂူုဆန်မြို့မှာ.. ရဲကသုံးတာ.. စစ်တပ်ပစ္စည်းတွေများသမို့.. သမ္မတအမိန့်နဲ့.. ပိတ်လိုက်တာပါ…။
သူ့နေရာ..တပ်ထဲမှာ.. အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေသုံး.. အကောင်းဆုံးတွေနဲ့နှပ်နေယုံ…။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစစ်တပ်ကြီးရှိတဲ့.. အမေရိကားမှာ.. ကျုပ်လိုလမ်းခရီးခဏခဏထွက်နေသူတောင်.. … စစ်သားနဲ့.. စစ်ကားတွေ.. မြို့ထဲမှာသွားလာနေတာ… မမြင်ဘူးသေး….။
May 18, 2015 – President Obama is banning the giveaway of military gear to civilian police, but already about 10000 pieces of the kinds of equipment he wants …
အဲသလိုစောက်ပိုတွေ လုပ်တာလောက် သိပ်စောက်ညင်ကတ်တာမရှိဘူး
ဒို့တောင် ဝမ်းနည်းလို့ ကတောက်ဆို ပြီး မျက်ရည်စက်တောက် ကျခဲ့မိပါကောလေ
The Siege ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
မြို့ထဲမှာ terrorist threat, bomb threat တွေ ကို မထိန်းနိုင်တော့လို့ စစ်တပ် က ဝင်မယ် လုပ်တာ။
အဲဒါကို စစ်ဘက်က လူကြီး (Bruce Willis) ပြောသွားတာ သဘောကျလို့
General William Devereaux: The Army isabroad sword, notascalpel. Trust me, senator – you do not want the Army in an American city.
တကယ်က မြို့ထဲ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ ဆိုတာ မြို့ထဲ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ ပြီးရမှာ။
ဘာလို့ စစ်တပ် က ပါ ပါ နေရသလဲ မသိ။း)
. မင်္ဂလာဈေးဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ရင် လျှပ်စစ်လိုင်းက welding ဆော်ခွင့် မပြုသင့်တာ အဓိကပါ ဒီလို အများသုံးအဆောက်အဦး (တခုခုဖြစ်ရင် ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ building မျိုးမှာ) power line ကို ဆက်ပြီး welding ဆော်တာ လုံးဝ (လုံးဝ) ခွင့်မပြုရပါ။
လိုအပ်လို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် ဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်တင် line က မသွယ်ရဘဲ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်သုံး weldind စက်ကိုသာ သုံးစေရပါမယ်။ ညဖက်လဲ ခွင့်မပြုသင့် နေ့ဖက် ကြီးကြပ်သူ အောက်မှာ လုပ်စေရပါမယ်
လျှပ်စစ်ကြိုးတွေမှာ တပ်ဆင်စဉ် quality မကောင်းတာ ပါနိုင်သလို နှစ်ကြာလာတော့ ချို့ယွင်းချက် ရှိနိုင်ပါတယ်
ခုတော့ ဆုံးရှုံးမှုက ကြီးလှပါတယ် တာဝန်ရှိသူများ သင်ခန်းစာကြီး ယူတတ်ကြပါစေ
.နောက်တစ်ချက်က..Sprinkler pipe ကို vPVC ပိုက်နဲ့သုံးထားပြီး sprinkler head ကိုလည်းကြိုးတွေနဲ့စည်းထားသေးတယ်… မီးလောင်ရင်သူ့ ပိုက်ကဘယ်လောက်ခံမှာလဲ.. မြန်မာပြည်မှာလုပ်လိုက်ရင် အဆန်းကြီးတွေ… (ဖွဘုတ်မှပုံနဲ့တကွတင်ထားတာ)
သနားလို့စ် မျက်ရည်တစ်စက်ကျသွားတယ် တောက်စ်
အဲ့ကို လာတဲ့ စစ်သားတွေကိုပဲ… သနားစဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြောကြ ရေးကြတာလည်းး ဖေ့ဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
အရပ်ထဲက စေတနာရှင်တွေက ပင်ပန်းနေတဲ့ စစ်သားလေးတွေကို အစားအစားတွေ ကွမ်းတွေ ဆေးတွေ
သွားပေးတာကို အဲ့ စစ်သားလေးတွေက လာဘ်စားတယ် ဘာညာ ထင်မှာ စိုးလို့… မယူရဲကြရှာတဲ့အကြောင်း…
စစ်သားနဲ့ပြည်သူကြားမှာ အထင်လွဲနေတာလေးတွေကို ပြင်သင့်ကြောင်း..စသည်ဖြင့်…
(ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ.. ဘယ်သူ့ကို ပိုသနားရမှန်း မသိတော့ဘူး.. )
နောက်ဆုံးတော့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးတစ်နေရာက မြန်ကြံ့ရေးလျှာ ပုရောဟိတ် ဆြာကြီးဦးကြောင်ကိုပဲ သနားမိပါတော့တယ်။
ဟဟား ရီရမယ့်အရှိန်ကဒီမှာပိုမြင့်တက်လာဒရယ် ဟဟား